Firy ny zaza ananan'i Will Smith? Ireo rehetra momba ny zanany lahimatoa, Trey, izay tsy dia fahita firy amin'ny Fetin'ny Ray - Pop-Kolontsaina
Firy ny zaza ananan'i Will Smith? Ireo rehetra momba ny zanany lahimatoa, Trey, izay tsy dia fahita firy amin'ny Fetin'ny Ray
Ilay mpilalao amerikana sady mpitendry zavamaneno Will Smith dia malaza amin'ny fampisehoana tsy misy kilema an-tsary. Namorona hira maro koa izy izay nanaitra ny fon'ny mpankafy azy ary nahatonga azy ho kintana.
Nandefa ny sarin'ireo zanany roa faralahy tao amin'ny media sosialy foana ilay mpilalao sarimihetsika. Saingy tsy hitan'ny mpankafy ny zanany lahimatoa, Trey Smith, izay nahavita namorona ny mombamomba azy.
Ny ankamaroany dia mety tsy mahalala ny zava-misy fa nanao hira ho an'i Trey i Will Smith. Ny lalana dia nanalefaka ny fon'ny mpankafy azy ary nankasitraka ny sary azy.
Ny fifandraisan'ny 52 taona sy ny vadiny, Jada Pinkett Smith, dia nahazo lohateny lehibe ihany koa tao anatin'izay taona vitsy lasa izay.
VAOVAO Fanapahan-kevitra izay hanova tanteraka ny fiainanao: hizara ny sarin'ny fetin'ny ray amin'ny zanany lahy i Jaden, Willow ary Trey i Will Smith. Milaza fa nanampy tsiky ho an'i Jaden izy. pic.twitter.com/WrJ1uy3VzN
- Def Noodles (@defnoodles) 20 Jona 2021
Zanakalahin'i Will Smith
Ilay superstar Hollywood dia efa manambady indroa. Namatotra ny fatotra tamin'ny mpilalao sarimihetsika sy modely Sheree Zampino izy tamin'ny 1992 rehefa nihalehibe toy ny kintana. Saingy nisaraka izy telo taona taty aoriana, tamin'ny 1995. Telo mianadahy ny mpivady, Willard Carroll Trey Smith III, telo taona tamin'izay.
Will Smith dia nanambady an'i Jada Pinkett Smith tamin'ny taona 1997. Nihaona izy ireo taona vitsivitsy talohan'izay rehefa nanao audition ho an'ny ampahany amin'ny sitcom-ny, The Fresh Prince of Bel-Air.
Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka ny fianakaviany izy mivady. Ny zanakalahin'izy ireo, Jaden Smith, dia teraka tamin'ny taona 1998, ary ny zanany vavy Willow Smith dia teraka tamin'ny 2000.
Vakio ihany koa: Austin McBroom sy KSI dia voalaza fa nandeha nifampiresaka tamin'ny Battle of the Platforms 2
Tsy mora tamin'i Trey Smith ny nanjary anisan'io fianakaviana io. Will Smith koa dia nilaza indray mandeha fa nitolona nandritra ny taona maro izy hihazonana fifandraisana akaiky amin'i Trey:
Niady nandritra ny taona maro izahay taorian'ny nisarahako tamin'ny reniny. Nahatsiaro ho voafitaka izy ary nilaozana. Tombontsoa be ho ahy ny famerenana amin'ny laoniny & famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana velona miaraka amin'ilay zanako malalako!
Smith dia afaka namelona indray ny fifamatorana nifampizarany tamin'ity zanany lahy voalohany ity. Ny mpianakavy tsirairay dia mifanakaiky ankehitriny, ao anatin'izany i Sheree Zampino sy Jada Pinkett Smith.
Ny lahimatoan'i Will Smith, Trey Smith
Nahomby tamin'ny naha mpilalao sarimihetsika azy ny 28 taona ary niseho tamin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra maro. Niseho tamin'ny sarimihetsika fohy maro ihany koa izy ary nanaporofo fa nandova ny karisma sy talenta vitsivitsy an'ny rainy malaza izy.
Trey Smith dia mpitendry mozika hajaina ary niasa tamina tetikasa marobe niaraka tamin'ny zandriny lahy, Jaden sy Willow. Izy koa dia ao amin'ny Spotify amin'ny maha mpanakanto azy, ary ny sehatra dia mitanisa mpihaino 62 isam-bolana ho an'i Trey.
Mampiorina ny maha-mozika azy ity mpanakanto ity ary maniry fatratra ny hahita fahombiazana.
Trey Smith dia manana vola mitentina 2 tapitrisa $, ao anatin'izany ny vola azony avy amin'ny ezaka mozika sy sarimihetsika, miaraka amin'ireo fifanarahana fifanarahana. Mavitrika amin'ny Instagram ihany koa izy ary matetika mamoaka ny sarin'ny fianakaviany.
Notazomina hatry ny ela ny kintana, saingy faly ny mpankafy mahita fa manangana ny asany amin'ny sehatry ny fialamboly izy.
Vakio ihany koa: Tratry ny afo i Jay Park taorian'ny dreadlocks nataony tamin'ny horonantsary mozika 'DNA Remix' niteraka adihevitra 'fizarana kolontsaina'
3 volana ao anatin'ny fifandraisana izay antenaina
Ampio Sportskeeda hanatsara ny fandrakofany ny vaovao momba ny kolontsaina pop. Raiso izao ny fanadihadiana mandritra ny 3 minitra .
famantarana ianao mifandray ara-panahy amin'ny olona iray
inona no hatao rehefa mankaleo irery ao an-trano ianao
impiry aho no tokony hahita ny sipako ao anatin'ny herinandro